ख्रीष्टमस : प्रेमको उत्सव
कोशी अनलाइन मङ्गलबार, ०८ पुष, २०७६ मा प्रकाशित
आज विश्वभरका मानिसहरूको ध्यान एउटा व्यक्तितर्फ केन्द्रित भएको छ, त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जिजस क्राइष्ट जसलाई नेपालीभाषी इसाईहरूले येशू ख्रीष्टको नाउँले पनि पुकार्दछन् । सतहमा देखिँदा एउटा पन्थको प्रतिपादकको रूपमा देखिए पनि येशू ख्रीष्ट समग्र मानव जातिका निम्ति प्रेमका प्रतीक हुनुहुन्छ । उहाँमा केन्द्रित रहेर लेखिएको इसाईहरूको दिव्य पुस्तक बाइबलको निचोड पनि अन्ततः प्रेम नै हो । आजको यस आलेखमा ख्रीष्टमस र ईश्वरीय प्रेमका बारेमा छोटो चर्चा गरिएको छ ।
येशू को हुनुहुन्छ : यो प्रश्नको जवाफ दिन त्यति सजिलो छैन । बुझ्नेहरूले उहाँलाई फरक–फरक किसिमले बुझेका कारण उहाँको व्यक्तित्व र ईश्वरत्वलाई एउटै परिभाषाभित्र अटाउन सहज पनि छैन । तथापि येशू एक महान, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी, समाजसुधारक, अध्येता तथा परिवर्तनका सम्वाहक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सारा संसारले स्वीकारेको कुरा हो । विश्वमा भएका लगभग ३ अर्ब इसाईहरू भने येशूलाई त्योभन्दा पनि व्यापक दृष्टिकोणले हेर्छन् र उहाँलाई मानिसको पाप क्षमा गर्न र प्रेमको बिजारोपण गर्न आफैंलाई आहुति गर्ने महान बलिदानी ईश्वरको पुत्र मान्दछन् । आज यो मतलाई विश्वास गर्ने र अवलम्बन गर्ने मानिसहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ र विश्वमा इसाई आस्था सबैभन्दा बलियो आस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ ।
बाइबलअनुसार इशापूर्व ४ मा इजरायल देशको बेथलेहेम भन्ने गाउँमा येशूको जन्म भएको हो । उहाँ जन्मनुभन्दा ७०० वर्ष पहिले नै यशैया नाम गरेका एकजना भविष्यवक्ताले उहाँको जन्म कसरी हुन्छ र उहाँको नाउँ के राखिनेछ भन्नेसम्मको भविष्यवाणी गरेका थिए । बाइबल इतरका धर्मशास्त्रहरुमा पनि उहाँको जन्म, जीवन र मृत्युको बारेमा उल्लेख गरिएको कुरा आज चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । आम मानिसजस्तै आमाको गर्भबाट जन्मिएका तर परमेश्वरको आत्माको शक्तिले गर्भमा आकृत हुनुभएका येशू, पुरुष विर्यविना नै स्वरुप धारण हुनुभएकोले उहाँमा पुख्र्यौली श्राप र पापको कुनै दाग नरहेको बाइबलले स्पष्ट बताउँछ । मान्छे मतिभ्रष्ट भएर बाटो बिराइरहँदा, उसका गलत हर्कतहरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहँदा, स्वार्थी, अहंकारी र लोभी चरित्रको तीव्र विकास भइरहँदा संसार खराबीको जञ्जालले घेरिन पुग्यो । मान्छेले आफूले गल्ती गर्ने र त्यसको प्रायश्चितका लागि निर्दोष पशुको बलिदान गर्ने उटपट्याङ उपाय अपनाउन थाल्यो । यो पनि स्वार्थी चरित्रको अर्को पराकाष्ठा नै हो । यसरी स्वार्थ र घृणाले भरिएको संसारमा प्रेमको बिउ रोप्नका लागि येशू ख्रीष्टको निष्कलंक आगमन भएको हो ।
येशू किन मारिनुभयोः आज दुनियाँका मानिसहरूले गर्ने एउटा सङ्गीन प्रश्नचाहिँ येशू साँच्चै ईश्वर हो भने किन अपराधी झैं क्रूसमा टाँगिन पुग्यो ? किन उसले आफ्ना शत्रुहरूलाई दक्षिण भारतीय चलचित्रका नायकहरूले झैं ढिस्युँ ढिस्युँ पारेन ? भन्ने हो । यसको सहज उत्तर बाइबलमा छ । येशूले भन्नुभयोः “चोर त चोर्न, मार्न र नाश गर्न भनेर आउँछ तर म त तिनीहरूले जीवन पाऊन् र त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा पाऊन् भन्ने हेतुले आएँ ।” पापीलाई नाश गर्न र स्वघोषित धर्मीहरूलाई बचाउनका लागि संसारमा धेरै फिल्मी भगवानहरू उदाएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्ः जब जब धर्मको नाश हुन्छ, म पापीहरूको विनाश गर्न र धर्मीहरुलाई बचाउनका लागि अवतार लिएर आउनेछु । तर बाइबल फरक छ । बाइबलले भन्दछः धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन । सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमारहित भएका छन् । हुन पनि मानिस स्वभावैले पापी छ । जन्मने बित्तिकै मेरो र तेरोको भावना विकास भएको छ । छोटो समयको लागि पाहुनाको रूपमा यस संसारमा अवतरण गरेको मान्छेले आफ्नो सर्वस्व नै यही संसारलाई ठान्न पुग्दछ । यही भ्रमले उसलाई झनै बढी पाप कर्ममा लिप्त गराउँछ । हरेक पापी मानिसलाई उसको पापबाट फर्कन र उसले गरेका हरेक पापको मूल्य तिरिदिनका लागि येशू बलिदान हुनुभयो । उहाँ अपराधी भएकोले होइनतर तपाइँ र म अपराधी, पापिष्ठ र कुलड्डार भएकोले हाम्रो कुकर्मका खातिर उहाँ क्रूसमा टाँगिनुभएको हो । उहाँ कसैलाई मार्नका लागि आउनुभएको होइन, बरु ती मार्न तम्सिनेहरू समेतलाई बचाउन र अनन्त मृत्युमा पर्नबाट जोगाउन उहाँ आउनुभयो ।
जसरी एउटा मानिस बिरामी पर्दा उसलाई पशुको रगत चढाउन मिल्दैन, त्यसरी नै एउटा पापीलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनका लागि पशुको बलिदानले कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन । त्यसैकारण एउटा निष्कलंक बलिदानको रुपमा येशूले आफैंलाई बलिदान गर्नुभयो । उहाँको क्रूसको मृत्यु नै आज उहाँमा विश्वास गर्ने हरेकका लागि अनन्त जीवन हो । उहाँ शक्तिहीन भएर होइन तर हरेक पापी, दुष्ट र अज्ञानी मानिसहरूलाई समेत प्रेम गरेका कारण उहाँले फिल्मी हिरोले जस्तो आफ्ना विरोधीहरूलाई ढिस्युँ ढिस्युँ पार्नुभएन । अर्को कुरा सम्पूर्ण मानव जातिलाई उहाँले आफ्नै स्वरुपमा सृष्टि गर्नुभएका कारण जति नै दुष्ट भए पनि मानवहरु उहाँकै सन्तान हुन् । एउटा असल र साँचो पिताले आफूलाई हेला गर्‍यो वा अपमान गर्‍यो भनेर आफ्ना सन्तानलाई मार्न वा उनीहरुलाई नाश गर्न सक्दैन । त्यसैकारण येशूले फिल्मी ‘हिरो’ बन्ने चेष्टा गर्नुभएन ।
ख्रीष्टमस के होः येशूको जन्म भएको समय जाडो समय थियो भनिन्छ । त्यसैकारण नै गोठालाहरु राति आगो तापेर बसेका थिए । जब येशू एउटा गरिब व्यक्ति झैं पशुलाई खाना खुवाउने डुँडमा जन्मिनुभयो, स्वर्गदूतहरू गोठालाहरूको माझमा देखा परे र येशू जन्मिनुभएको खबर उनीहरूलाई सुनाए । ठीक त्यसै बेला आकाशमा एउटा नयाँ तारा उदायो र पूर्वीय चिन्तनका ज्ञाता, खगोल शास्त्रीहरु त्यस तारालाई पछ्याउँदै केही दिन लगाएर बालक येशू जन्मिनुभएको ठाउँमा पुगे भन्ने कुरा बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ । येशूलाई दिव्य बालकको रुपमा देखेर ज्योतिषहरूले उहाँको महिमा गरे अनि गोठालाहरूले एकजना मुक्तिदाता जन्मिएका छन् भनेर वरपरका मानिसहरूलाई सुनाए । उहाँ जन्मिनुभएको खुशियाली बाँड्नका लागि उनीहरूले नाचे, गाए अनि आनन्द गरे । पापको दासत्वमा फसेका ‘दासह’’ लाई सँधैका लागि छुटकारा दिनका लागि एउटा ‘मसिहा’ को आगमन यो संसारमा भयो भन्ने कुराले मानिसहरूमा अपार शान्ति र आनन्द छायो । जब मान्छे अति नै खुशी हुन्छ, उसले त्यो खुशी आफूभित्र मात्र सीमित गर्न सक्दैन, ऊ अरुलाई त्यो खुशी बाँड्न यति आतुर हुन्छ कि कसैले उसको मुख थुन्न खोजे पनि त्यसको कुनै परवाह गर्दैन । आज येशूलाई प्राप्त गर्ने मानिसहरू पनि त्यस्तै खुशी छन् । यो खुशी उनीहरू आफैंमा सीमित गर्न सक्दैनन् । अरुलाई बाँड्न र अरु पनि त्यो खुशीमा सहभागी भएको देख्न चाहन्छन् । त्यसैले कसैले रोक्न, थुन्न, छेक्न र बन्देज लगाउन खोज्दा पनि इसाईहरू चुप्प लागेर बस्दैनन् । वास्तवमा यही खुशीको खबर नै ख्रीष्टमस हो ।
येशूको आगमन केवल प्रेम बाँड्नका लागि हो कुनै धार्मिक पन्थ सुरु गर्न र मानिसहरूबीचमा दरार पैदा गर्नका लागि होइन । हरेक कुरामा राजनीति गर्न र नकारात्मक टिप्पणी गर्नका लागि यस संसारमा जन्म लिएका केही मानिसहरूले येशूको प्रेमलाई अपव्याख्या गर्न भ्याएका छन् । तर येशूले भन्नुभयो– “कसैले तिम्रो एउटा गालामा चड्काउँछ भने अर्को गाला पनि थापिदेऊ ।” इगो, बेइमानी र प्रतिशोधले भरिएको यस संसारमा योभन्दा ठूलो शान्तिकारी शिक्षा अरु के हुन सक्ला र ? येशूको यही महान शिक्षा र अरुका निम्ति गरिएको बलिदान नै संसार परिवर्तन गर्ने महत्त्वपूर्ण शुत्र हो । घृणा र आतंकले विनाश मात्रै ल्याउँछ । हिटलर, मुसोलिनी लगायतकाले आतंक फैलाएर संसार जित्न खोजे तर पूर्णतः असफल भए । उनीहरूको राज्य केही वर्ष मात्रै टिक्न सक्यो । तर येशूको प्रेमको साम्राज्य २००० वर्ष अगाडि सुरु भयो, अहिलेसम्म चल्दैछ र अनन्तकालसम्म चलिनै रहनेछ । किनभने सृष्टि रहुञ्जेल प्रेमको महत्त्व हराएर जानेछैन ।
–लेखक विराटनगर इसाई समाजका उपाध्यक्ष साथै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली ख्रीष्टियन मिडिया सञ्जालका सचिव हुनुहुन्छ ।